0312 GMT February 24, 2020
In Zimbabwe’s second city Bulawayo, Abraham Kavalanjila and his two sons have given up waiting for the water to come back on, and trekked out into the maize fields to draw on an open well.
Millions at risk after toxins found in Harare water supply: Study
Water being pumped to millions of residents in Zimbabwe’s capital city came from reservoirs contaminated by dangerous toxins, according to a report seen by the Guardian.
The United Nations said Tuesday it was procuring food assistance for 4.1 million Zimbabweans, a quarter of the population in a country where shortages are exacerbated by runaway inflation and climate-induced drought.
Zimbabwe is on the brink of manmade starvation with close to 60 percent of the population now food insecure, a UN envoy said.
When it comes to adverse conditions for stock-market trading, Zimbabwe’s bourse belongs in a special category for extreme cases.
African heads of state joined thousands of Zimbabweans at a state funeral Saturday for Zimbabwe’s founding president Robert Mugabe whose burial has been delayed for at least a month until a special mausoleum can be built for his remains.
Zimbabwe has gone from falling prices to three-digit inflation in 30 months
Zimbabwe has gone from deflation to triple-digit inflation in less than three years.
Nearly 1,000 killed in cyclone in Mozambique, Zimbabwe
Death toll surpasses 259 after Cyclone Idai wreaks havoc in Zimbabwe
Formerly built up areas became flooded and covered by stones after Cyclone Idai swept through the area in Chimanimani, footage filmed on Saturday shows.
Page Generated in 3/3104 sec